‘न्युयोर्कमा सांस्कृतिक केन्द्र बनाउन लक्ष्य भन्दा धेरै रकम कबोल हुँदा निकै उत्साहित छौं’ « Khasokhas Follow @khasokhasmag
– रवि कोइराला, अध्यक्ष, रिजउड नेपाली समाज, न्युयोर्क
तपाईहरुले लक्ष्य राखेको भन्दा धेरै रकम संकलनको घोषणा हुँदा कस्तो लागिरहेको छ ?
यसबाट हामी निकै उत्साहित छौं । हामीले एक मिलियन डलर संकलनको लक्ष्य राखेका थियौं । तर न्युयोर्कबासी र अमेरिकाबासी नेपालीहरुले स्वतस्फूर्त सहयोग गर्नुभयो । यसबाट हामी नेपालीहरु एकजुट भएमा जुनसुकै काम पनि सक्षमताका सार्थ गर्न सक्छौं भन्ने देखियो ।
प्रतिबद्धता भए अनुशार रकम संकलन होला त ?
रकम संकलनका लागि सजिलो त छैन । तर त्यसका लागि हामीले टिम बनाएर काम गरिरहेका छौं । त्यसैले संकलन हुनेमा आशंका छैन । समयमै रकम संकलन हुनेमा विश्वस्त छौं ।
अब दुईबर्षमा सांस्कृतिक केन्द्र बन्ने भयो त ?
अब दुईबर्षमा सांस्कृतिक केन्द्र बनाउन सम्भव हुने भयो । हामी पैसाका कारणले रोकिएका थियौं । तर अब सार्वजनिक रुपमा नै प्रतिबद्धता आएकाले हामी निकै उत्साहका साथ लागिपरेका छौं । हामीले हाम्रो घोषणा पूरा गर्नेछौं ।
सांस्कृतिक केन्द्र सबैको साझा बनाउन के गर्नुहुन्छ ?
रिजउड नेपाली समाजले पहल गरेपनि यो अमेरिकामा बस्ने सबै नेपालीहरुको हो । त्यसमा हामी निश्चिन्त हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा दाता, महापुराणमा उपस्थीत र अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मसँग उहाँहरुप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने शब्द छैन । म उहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र नमन गर्न चाहन्छु । सबैले आफ्नोपन महसुस गर्दा म निकै हर्षित र उत्साहित छु । सबैलाई एकमुष्ठ रुपमा बधाई समेत ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।